အူရီဒူးမြန်မာနှင့် UNDP တို့ ပူးပေါင်းကျင်းပသော The Hackathon 2019 နည်းပညာဆိုင်ရာပြိုင်ပွဲ၏ အနိုင်ရရှိသူများအား ထုတ်ပြန် – TodayZ
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး၊ ပညာရေးနှင့် ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှု ဟူသည့် ကဏ္ဍ ၃ ရပ် အတွက် နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ ဆန်းသစ်တီထွင်မှုများအား ရှာဖွေဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့
ရန်ကုန်၊ မြန်မာ – အူရီဒူးမြန်မာနှင့် UNDP တို့ ပူးပေါင်းကျင်းပသည့် The Hackathon 2019 တွင် အနိုင်ရရှိသည့်အဖွဲ့ ၆ ဖွဲ့ အား တနင်္ဂနွေနေ့တွင် ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပါသည်။ အနိုင်ရရှိသူများသည် စုစုပေါင်း ပြိုင်ပွဲဝင် အရေအတွက် ၂၀၀ ကျော်အနက်မှ ရွေးချယ်ခံခဲ့ရခြင်းဖြစ်ပြီး ပြိုင်ပွဲဝင်များအားလုံးသည် ရန်ကုန်နှင့် မန္တလေးမြို့များတွင် အောက်တိုဘာလ ၁၈ ရက်နေ့မှ ၂၀ ရက်နေ့အထိ တစ်ပြိုင်နက်ထဲ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သည့် ပြိုင်ဆိုင်မှုပြင်းထန်သော ၂ ရက်ခွဲကြာ ပြိုင်ပွဲအတွင်း သတိပြုမှတ်သားဖွယ် ရှေ့ပြေးပုံစံများနှင့် သက်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းပုံစံများအား အပြိုင်အဆိုင် တီထွင်ဖန်တီးခဲ့ကြသည်။
အငယ်တန်းအဆင့်ပြိုင်ပွဲတွင် စုစုပေါင်း ၂၈ သင်းမှ ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ကြပြီး ၄င်းသည် ကျောင်းသားကျောင်းသူများနှင့် The Hackathon ပြိုင်ပွဲဝင်အသစ်များအတွက် ရည်ရွယ်ပါသည်။ အငယ်တန်းအဆင့်ပြိုင်ပွဲတွင် အနိုင်ရရှိသည့်အဖွဲ့များမှာ ကျေးလက်ဒေသ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ကဏ္ဍအတွက် မန္တလေးမြို့မှ Team Glorious , ပညာရေးကဏ္ဍအတွက် ရန်ကုန်မြို့မှ Team MYLP 2K18 နှင့် ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုဆိုင်ရာကဏ္ဍအတွက် ရန်ကုန်မြို့မှ Team F တို့ဖြစ်ကြပြီး ၎င်းတို့သည် မိုဘိုင်းအက်ပလီကေးရှင်းများဖြစ်ကြသည့် Sein Lan, Nyan-San နှင့် Weather Smart တို့ကို အသီးသီး တီထွင်ခဲ့ကြသည်။
ပညာရေးကဏ္ဍတွင် ဆန်းသစ်တီထွင်မှုကို ယှဉ်ပြိုင်အနိုင်ရခဲ့သည့် Team MYLP 2K18 မှ ဝေလင်းက “ပထမဆုံး လာပြိုင်တာပါ။ အရမ်းပျော်ပြီး စိတ်လှုပ်ရှားပါတယ်။ အစထဲက ဆုရမယ်လို့တော့ မှန်းထားပါတယ်။ ရှေ့ဆက်ပြီးတော့လည်း အများကြီး ဆက်ကြိုးစားသွားဖို့ အဆင်သင့်ဖြစ်နေပါပြီ။” ဟု ပြောကြားခဲ့သည်။
‌ပညာရှင်အဆင့်ပြိုင်ပွဲတွင် စုစုပေါင်း ၂၁ သင်းမှ ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ကြပြီး ၄င်းသည် စဦး လုပ်ငန်းများနှင့် ယမန်နှစ် Hackathon တွင် ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့သူများအတွက် ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ပညာရှင်အဆင့်ပြိုင်ပွဲတွင် အနိုင်ရရှိသည့်အဖွဲ့များမှာ ကျေးလက်ဒေသ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ကဏ္ဍအတွက် ရန်ကုန်မြို့မှ Team Agri Light, ပညာရေးကဏ္ဍအတွက် ရန်ကုန်မြို့မှ Team Twee Twee နှင့် ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုဆိုင်ရာကဏ္ဍအတွက် ရန်ကုန်မြို့မှ Team Innovatory တို့မှ ၎င်းတို့၏ မိုဘိုင်းအက်ပလီကေးရှင်များဖြစ်ကြသည့် Kyat Lat Pay, Twee Bot နှင့် Sein တို့ဖြင့် ရရှိခဲ့ကြပါသည်။
မခိုင်ဆု၏ The Hackathon 2018 တွင် ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့သည့် အတွေ့အကြုံမှာ မှတ်သားဖွယ်ရာဖြစ်ခဲ့ပြီး ယခုနှစ်တွင်လည်း ထပ်မံ ယှဉ်ပြိုင်စေရန် တွန်းအားပေးခဲ့ပါသည်။ သူမအနေဖြင့် Team Twee Twee တွင် ပါဝင်၍ ထပ်မံစိန်ခေါ်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ပြီး အကြီးတန်းအဆင့် ပညာရေးကဏ္ဍတွင် အနိုင်ရရှိခဲ့ပါသည်။ “ညီမရဲ့ နည်းပညာဆိုင်ရာပြိုင်ပွဲအတွေ့အကြုံက ၃နှစ်လောက်ရှိပါတယ်။ ညီမတို့အဖွဲ့ထဲက အဖွဲ့သားတွေက ဒီနှစ်ပထမဆုံးပါ။ ပထမကတော့ ပင်ပန်းပါတယ်။ ဆုရမယ်မှန်းတော့ ထင်တော့မထင်ထားဘူး။ တကယ်ကို မယုံထားဘဲရတဲ့အတွက် အရမ်းပဲ ဝမ်းသာပါတယ်။” ဟု ပြောကြားပါသည်။
ဆုချီးမြှင့်ပွဲတွင် ပါဝင်ဆုံးဖြတ်ပေးခဲ့ပြသည့် အကဲဖြတ်အဖွဲ့ဝင်များမှာ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး၊ ပညာရေးနှင့် ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုဆိုင်ရာကဏ္ဍများတွင် ပြည်တွင်းပြည်ပမှ နာမည်ကျော်ပညာရှင်များ ပါဝင်ကြပါသည်။
ပြိုင်ပွဲဝင်အသင်းများအား ပရိုဂရမ်ရေးဆွဲမှု၊ စီးပွားရေးပိုင်းဆိုင်ရာ အစီအစဉ်ရေးဆွဲမှု၊ စဉ်ဆက်မပြတ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပန်းတိုင်များအား အရှိန်အဟုန်မြင့် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်နိုင်စေရန် ကူညီပေးနိုင်မည့် လူမှုရေးပိုင်းဆိုင်ရာသက်ရောက်မှုများအပြင် အဖွဲ့လိုက် ဆောင်ရွက်မှုနှင့် ဆက်သွယ်ရေးပိုင်းအစရှိသည့် အချက်များအပေါ်မူတည်၍ အမှတ်ပေးအကဲဖြတ်ခဲ့ပြီး အငယ်တန်းအဆင့် ပြိုင်ပွဲတွင် အနိုင်ရရှိသည့် အဖွဲ့များအနေဖြင့် ဆုကြေးငွေ မြန်မာငွေကျပ် သိန်း ၃၀ စီနှင့် ပညာရှင်အဆင့်ပြိုင်ပွဲတွင် အနိုင်ရရှိခဲ့သည့် အဖွဲ့များအနေနှင့် တစ်ဖွဲ့လျှင် ဆုကြေးငွေ မြန်မာငွေကျပ် သိန်း ၆၀ အား ဆွတ်ခူးရရှိခဲ့သည့်အပြင် အခြားသော ကူညီထောက်ပံ့မှုများကိုပါ ရရှိသွားနိုင်မည် ဖြစ်သည်။
ဆုချီးမြှင့်ပွဲ အခမ်းအနားပြီးဆုံးချိန်တွင် အူရီဒူးနှင့် UNDP တို့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မည့် Innovation Hub ကိုလည်း မိတ်ဆက်ကြေညာပေးခဲ့ပါသည်။ ရန်ကုန်မြို့ရှိ အူရီဒူးမြန်မာရုံးချုပ်တွင် တည်ရှိပြီး တင့်တယ်စွာ တည်ဆောက်ထားသည့် အဆိုပါ Innovation Hub သည် ငယ်ရွယ်သော စွန့်ဦးတီထွင်သူများအတွက် လုပ်ငန်းများ အရှိန်အဟုန်မြင့် ဆောင်ရွက်နိုင်စေရန်၊ ကျွမ်းကျင်မှုများ ပိုမိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာစေရန် နိုင်ငံတကာတွင် ကျင့်သုံးနေသည့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်အညီ လမ်းညွှန်မှုများ ပေးအပ်သွားမည် ဖြစ်သည်။
ပြိုင်ပွဲတွင် အနိုင်ရရှိသူများနှင့် ဆန်ခါတင်အဖွဲ့များသည် Innovation Hub မှ ပို့ချပေးသွားမည့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု သင်တန်းအား တက်ရောက်သင်ကြားခွင့် ရရှိမည်ဖြစ်သည်။ ပြိုင်ပွဲဝင်များအနေနှင့်လည်း ၎င်းတို့၏ လုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာစေရန်နှင့် ဆန်းသစ်တီထွင်မှုများ ပိုမိုပြုလုပ်လာနိုင်စေရန်၊ ထိုမှတဆင့် တဖြည်းဖြည်းချင်းနှင့် အောင်မြင်၍ ပြည်သူလူထုကို အကျိုးပြုနိုင်သော စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ အဖြစ် ရပ်တည်နိုင်ရန်ဟူသည့် အိပ်မက်ကို အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်နိုင်စေရန် Innovation Hub မှ ကူညီထောက်ပံ့ပေးမှုကို စိတ်လှုပ်ရှားမျှော်လင့်မိကြောင်း ဖော်ပြခဲ့ကြပါသည်။ Innovation Hub မှ ရေရှည်တည်တံ့သော ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် စဉ်ဆက်မပြတ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပန်းတိုင်များအား မြန်မာနိုင်ငံ၌ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရာတွင် တွေ့ကြုံရသည့်စိန်ခေါ်မှုများအား ဖြေရှင်းနိုင်ရန်အတွက် ပံ့ပိုးကူညီပေးသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။ ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်သူများအနေဖြင့် The Hackathon တွင် ပါရှိသည့် ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိးတိုးတက်ရေး၊ ပညာရေးနှင့် ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုဆိုင်ရာကဏ္ဍ စသည်တို့နှင့် အမျိုးသမီးများအား အားပေးကူညီမှုစသည့် ကဏ္ဍများအပြင် ကျန်းမာရေး၊ စီမံအုပ်ချုပ်ရေးနှင့် ဘဏ္ဍာရေးပိုင်းဆိုင်ရာ ဝန်ဆောင်မှုကဏ္ဍများအတွင်း ပေါ်ပေါက်လာမည့် အခွင့်အလမ်းများအကြောင်းနှင့် ပတ်သက်၍လည်း လေ့လာသင်ယူခွင့် ရရှိသွားနိုင်မည် ဖြစ်သည်။
အူရီဒူးမြန်မာ၏ CEO ဖြစ်သူ Mr. Rajeev Sethi မှ “ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ကြတဲ့ စွန့်ဦးတီထွင်သူလူငယ် အယောက် ၂၀၀ နီးပါးနဲ့အတူ The Hackathon 2019 ဟာ မြန်မာလူငယ်တွေရဲ့ အကောင်းဆုံးသော ကျွမ်းကျင်မှုတွေ၊ စူးစိုက်နှစ်မြှုပ်ဆောင်ရွက်မှုတွေနဲ့ အသိပညာအတတ်ပညာ စွမ်းရည်တွေကို ဖွင့်လှစ်ပြသနိုင်တဲ့အတွက် အံချီးဖွယ်အောင်မြင်မှုကို ရရှိခဲ့ပါတယ်။ ပြိုင်ပွဲဝင်တွေအားလုံးအနေနဲ့ ဒီပြိုငဆိုင်မှုပြင်းထန်တဲ့ နှစ်ရက်နဲ့နေ့တစ်ဝက်ပြိုငပွဲကြီးကို အောင်မြင်ပြီးမြောက်အောင် ယှဉ်ပြိုင်အစွမ်းပြနိုင် တဲ့အတွက် ဂုဏ်ယူသင့်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ ဒီနေ့မှာ UNDP ရဲ့ စဉ်ဆက်မပြတ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ပန်းတိုင်တွေကို ပံ့ပိုးပေးတဲ့အနေနဲ့ ရန်ကုန်မြို့ရှိ အူရီဒူးမြန်မာရဲ့ ရုံးချုပ်မှာ Innovation Hub ကို စတင်ဆောင်ရွက်ပေးလိုက်ကြောင်းလည်း ဝမ်းမြောက်စွာ ကြေညာပေးလိုပါတယ်။ စွန့်ဦးတီထွင်သူလူငယ် အယောက် ၈၀လောက်ကို နောက်ထပ်တစ်နှစ်ကြာ လေ့ကျင့်ပျိုးထောင်ပေးသွားမှာဖြစ်ပြီး မြန်မာ့ဒစ်ဂျစ်တယ် အနာဂတ်ရဲ့ စွန့်ဦးတီထွင်ဖန်တီးသူတွေအဖြစ် တိုးတက်အောင်မြင်အောင် ပံ့ပိုးကူညီပေးသွားမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။” ဟု ပြောကြားလိုက်ပါသည်။ (???)
“စဉ်ဆက်မပြတ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ပန်းတိုင်တွေကို အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်တဲ့နေရာမှာ ဆန်းသစ်တီထွင်နိုင်စွမ်းက အရမ်းကို အရေးပါတဲ့ အခန်းကဏ္ဍနေရာက ပါဝင်နေပါတယ်။ ဒီနေ့ ကျွန်မတို့ စတင်မိတ်ဆက်ခဲ့တဲ့ Innovation Hub က မြန်မာလူငယ်တွေအတွက် ဆန်းသစ်တဲ့ စိတ်ကူးစိတ်သန်းတွေနဲ့ ချဉ်းကပ်မှုနည်းလမ်းတွေကို ဖန်တီးနိုင်ဖို့အတွက် များစွာ ကူညီဆောင်ရွက် ပေးသွားနိုင်မှာဖြစ်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဆိုင်ရာ စိန်ခေါ်မှုတွေကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းဖို့အတွက် ပြန်လည်ပံ့ပိုးပေးနိုင်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။ ဒီနေ့ပြိုင်ပွဲဝင်အဖွဲ့တွေ တင်ဆက်ပြသခဲ့တဲ့ စိတ်ကူးစိတ်သန်း အကြံဉာဏ်တွေအားလုံးကိုလည်း ကျွန်မအနေနဲ့ သဘောကျနှစ်သက်မိပြီး အထူးသဖြင့် နောက်နှစ်မှာ အနိုင်ရ အနိုင်ရရှိခဲ့တဲ့အဖွဲ့တွေရဲ့ ဆန်းသစ်ဖန်တီးမှုတွေအသက်ဝင်လာမယ့် အချိန်ကို အရမ်းကို မျှော်လင့် နေမိပါတယ်။” ဟု UNDP ၏ Deputy Resident Representative ဖြစ်သူ Ms. Dawn del Rio က ပြောကြားပါသည်။
The Hackathon 2019 နည်းပညာပြိုင်ပွဲအား ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ရန် မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းရှိ မြို့ပေါင်း ၁၂ မြို့မှ ပြိုင်ပွဲဝင်ပေါင်း ၃၀၀ ခန့်လျှောက်ထားခဲ့ကြပြီး ပြိုင်ပွဲဝင်ပေါင်း ၂၀၀ နီးပါသည် ပြိုင်ပွဲသို့ ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခွင့် ရရှိခဲ့ပါသည်။
The Hackathon သည် မြန်မာနိုင်ငံမှ လူငယ်များ၏ ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ ဆန်းသစ် တီထွင်နိုင်စွမ်းနှင့် စွန့်ဦးတီထွင်နိုင်စွမ်းများအား မြှင့်တင်ပေးနိုင်ရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် အူရီဒူးမြန်မာနှင့် UNDP တို့မှ ပူးပေါင်းပြုလုပ်သည့် အထူးအစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၄င်းသည်မြန်မာနိုင်ငံမှ လူငယ်များ၏ ဆန်းသစ်သော စိတ်ကူးအကြံဉာဏ်များအား ဖော်ထုတ်ပေးနိုင်ရန်၊ ထိုမှတဆင့် စဉ်ဆက်မပြတ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပန်းတိုင်များအား မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာအသုံးပြု၍ အောင်မြင်အောင် ဖန်တီးပုံဖော်နိုင်ရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
The Hackathon 2019 နည်းပညာပြိုင်ပွဲနှင့် ပတ်သက်၍ ပိုမိုသိရှိလိုပါက www.thehackathon2019.com တွင် ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်မည် ဖြစ်သည်။